Bisha barakeysan ee Ramadaan - Sidee loo soomaa? - Injiilka oo ku qoran af-soomaali
Marka la gaaro waqtigii la soomi lahaa bisha Ramadaan waxaan maqlaa saaxiibaday oo ka doodaya sida ugu wanaagsan ee loo soomi karo.
Dooddu waxay ku saabsan tahay goorta la bilaabayo iyo joojinta soonka. Marka Ramadaanku yimaado xagaaga, maadaama aan waqooyi ku noolnahay ku dhawaad ​​16 saacadood ama ka badan oo iftiin dharaar ah, su’aashu waxay soo baxdaa haddii qofku u adeegsan karo heer kale oo iftiin maalinle ah (sida qorrax -soo -baxa ilaa kala -soocidda Mecca) soonka. Asxaabtaydu waxay raacaan xukunno kala duwan oo aqoonyahanno kala duwan ka soo saareen arrintan iyo su’aalo la mid ah oo ku saabsan waxa la oggol yahay iyo waxa aan bannaanayn.
Muhiimad ahaan maaddaama wada -xaajoodyadan yihiin, inta badan waxaan hilmaamnaa su’aasha si la mid ah muhiim u ah sida loo noolaado si soonkeennu u raalli geliyo Alle ama Ilaah.Nebiyadu wax bay ka qoreen arrintaas iyo farriintooda ku saabsan ku -noolaanshaha habboon ee soonka farxadda leh ayaa maanta muhiim u ah sida wakhtigooda.
Jadwalka Historical Nabiga Dawood (SCW) iyo qaar ka mid ah nebiyadii kale oo Zabur
Nebi Ishacyaah wuxuu noolaa waqti ay rumaystayaashu si adag ugu dhaqmaayeen waajibaadkooda diimeed (sida salaadda iyo soonka). Waxay ahaayeen diin.
Jadwalka taariikhiga ah ee Ishacyaah) iyo qaar kale oo nebiyo ah oo ku sugan Zabur
Laakiin sidoo kale waxay ahayd waqti musuqmaasuq aad u weyn (eeg soo bandhigida Zabur). Dadku si joogto ah ayay u dagaallami jireen, muran iyo muranna u dhexayn jireen. Markaasuu nebigu u keenay farriintan.
Soonka dhabta ah
ad u qayli, oo waxba ha iskula hadhin, codkaagana sida buun oo kale kor u qaad, oo dadkayga xadgudubkooda u sheeg, oo reer Yacquubna dembiyadooda u sheeg.
2 Laakiinse iyagu maalin kasta way i doondoonaan, oo waxay jecel yihiin inay jidadkayga ogaadaan. Sidii quruun xaqnimo samaysay oo aan innaba amarkii Ilaahooda ka tegin waxay i weyddiistaan amarro xaq ah, oo waxay aad u jecel yihiin inay Ilaah ku soo dhowaadaan.
3 Waxay leeyihiin, Bal maxaannu u soonnay oo aad u arki weyday? Bal maxaannu naftayada u dhibnay oo aad u daymoon weyday? Bal eega, maalintii aad soontaan waad iska raaxaysataan, oo shaqaalihiinna oo dhanna waad dulantaan.
4 Bal eega, idinku waxaad u soontaan dirir iyo dood keliya, iyo inaad feedhkii sharnimada wax ku dhufataan. Maanta uma soontaan si codkiinna xagga sare looga maqlo.
5 Soonkii aan doortay ma waxaas oo kalaa? Ma maalin nin naftiisa dhibo baa? Ma inuu madaxiisa sida cawsduur u foororsho, oo uu hoostiisa dhar joonyad ah iyo dambas ku goglo baa? Waxaa ma waxaad tidhaahdaan, Waa soon iyo maalin Rabbigu aqbali karo?
6 Sow kanu ma aha soonkii aan doortay in silsiladihii sharnimada la furo, oo guntimihii harqoodka la debciyo, oo kuwa la dulmay la xoreeyo, oo aad harqood kasta jebisaan?
7 Sow ma aha inaad kibistaada ka gaajaysan u gooysid, oo aad masaakiinta aan hoy lahayn gurigaaga soo gelisid, oo markaad aragtid mid qaawan aad wax huwisid, oo aadan xigtadaada aad isku jiidhka tihiin ka dhuuman?
8 Oo markaas iftiinkaagu wuxuu u soo kaahi doonaa sida kaaha waaberi, oo bogsiintaaduna dhaqso bay u soo bixi doontaa, oo xaqnimadaaduna way ku hor socon doontaa, oo ammaanta Rabbiguna way ku daba socon doontaa.
9 Markaasaad dhawaaqi doontaa, oo Rabbiguna waa kuu jawaabi doonaa, waad u qayshan doontaa, oo isna wuxuu ku odhan doonaa, Waa i kan. Haddaad dhexdaada ka fogaysid harqoodka, iyo farta fiiqiddeeda, iyo hadlidda sharka ah,
10 oo haddaad ka gaajaysan quudkaaga siisid, oo aad nafta dhibaataysan dherjisid, markaas iftiinkaagu gudcur buu ka soo dhex kaahi doonaa, oo madowgaaguna wuxuu noqon doonaa sida hadh cad oo kale.
11 Oo Rabbiguna had iyo goorba wuu ku hoggaamin doonaa, oo iyadoo abaar ah ayuu naftaada dherjin doonaa, lafahaagana wuu adkayn doonaa, oo adna waxaad noqon doontaa sida beer la waraabiyey, iyo sida il biya ah oo aan innaba biyeheedu gudhin.
12 Oo kuwaaga ayaa meelihii hore oo burburay dhisi doona, oo waxaad sara kicin doontaa aasaasyada qarniyada badan, oo waxaa laguugu yeedhi doonaa Jabniinkabe, iyo kan jidadka cusboonaysiiya si loo dego.
Ishacyaah 58: 1-12
Ballan -qaadyadan nolosha badan ee soonka runta ah miyaanay ahayn kuwo yaab leh? Laakiin dadkii waagaas ma aysan dhegaysan nebiga mana aysan toobad keenin (waxbaridda nebi Yaxye ee ku saabsan towbad keenka). Markaa waxaa loo xukumay sidii Nebi Muuse wax u sii sheegay. Farriintan ayaa weli noo ah digniin tan iyo sharraxaaddii Ishacyaah ee sida ay u dhaqmeen iyagoo sooman maanta oo kale
Wax faa’iido ah ma leh in la soomo, wax kasta oo xeer ah oo imaamyadeennu oggol yihiin, welina ku guul darreystaan ​​raalligelinta Eebbe iyagoo ku nool hab isaga ka xumaada. Markaa fahan sida loo helo naxariistiisa iyada oo loo marayo Ciise Masiix.
Tags:maxaa banaana soonka.nabiyada oo baraya soonkasoonka saxda ahsoonka xalaal ahSoonka xalaasha ah